ISIENNA SAUCE KWI 'SHARK TANK': IINYANI EZI-5 EZIKHAWULEZAYO EKUFUNEKA UYAZI - IINDABA
ISienna Sauce kwi 'Shark Tank': I-5 iinyani ezikhawulezayo ekufuneka uyazi
Oosomashishini uMonique Crayton kunye noTyla-Simone Crayton bathathe ifemu yabo, iSienna Sauce, baya kookrebe kwiiABC’s Itanki yeShark ukubona ukuba banokulinganisa intengiselwano komnye wabarhwebi abaninzi.
samantha ponder net efanelekileyo
Oosomashishini babonelela ngefemu yabo kookrebe uBarbara Corcoran, uLori Greiner, uMark Cuban, uKevin O'Leary kunye noNdwendwe uShark Kendra Scott.
Ngokwe-episode synopsis, Umntwana-preneur kunye nomama wakhe waseHouston, eTexas, banyamezele ngobunzima bokumilisela ifemu yesosi enenzuzo.
Nantsi eyona nto ingcono onokuyifumana malunga neSienna Sauce kwi Itanki yeShark:
1. U-CEO uneminyaka eli-17 ubudala
Umphathi weCEO Isosi yeSienna uneminyaka eli-17 ubudala. Wakha isosi yakhe yamaphiko kuqala xa wayeneminyaka esibhozo ubudala kwaye waqala ukuyinyusa xa wayeneminyaka eli-14 ubudala. Ngokwe-ABC 13, wayithiya ngegama lendawo ahlala kuyo.
Ndingavuka ngentsasa yangeCawa, ndibhotile isosi, ndiyisonge, emva koko ndiyikhuthaze kwindawo endihlala kuyo, uTyla-Simone Crayton wazise iABC 13. Nje ukuba ndifumane imali eyaneleyo kuloo nto, besikulungele ukuyenza kwingcali umvelisi kwaye ufumane isosi yam yenziwe.
Iminyaka yeCrayton inokuyichukumisa Itanki yeShark Ookrebe, nangona kunjalo awanelanga ngamaxesha onke ukuba afumane isivumelwano komnye wabarhwebi abaninzi.
2. Inkampani iQalile ngokuThengisa iiWings ezivela kwiKhitshi loSapho
(* 5 *)
Ngodliwanondlebe ne-CNBC, I-Saenna Sauce yaqala xa uCrayton ezimisele ukuqala ukukhuthaza amaphiko ekhitshini lakhe ukuze aqale ukukhulisa isiseko somthengi ngeesosi zakhe. Xa umama wakhe wavumayo, uCrayton wafumana umsebenzi.
Silungiselelwe ngaphakathi ekhitshini kunye neefreyimu ezi-4 ezinzulu kunye ne-twine eyandisiweyo esebenza ekhaya nangaphandle kweminyango eyadi yamandla, uCrayton wazisa indawo. Sijike indawo yokungena yokutyela yaba yindawo yethu yokulungela ukuthenga kwaye sithathe iiodolo kunye nemali apho.
Wongeze wathi, ibintle kakhulu. Abahlobo, abendlu, kunye nabamelwane bomthonyama [bonke beza] ukunceda ingokuhlwa yethu yokuqala.
Bakwenze oko ngokuhlwa ngolwesiHlanu ukusuka ngo-Epreli 2017 ukuya kuDisemba 2017 kwaye bagqibela ngokuzisa i-48,000 yeedola kwiinyanga ezili-12.
3. Isosi ifumaneka ngenani leencasa
Ngexesha lokubhalwa, iSienna Sauce iyafikeleleka kwiincasa ezintathu kwiwebhusayithi yenkampani .
Iincasa ezifumanekayo ngoku zineziqholo, iilekese kunye netangy pepper kunye nemon pepper. Banokuthengwa ngeepakethe ezintathu okanye kwiphakheji yoluhlu, eza nayo enye yazo zonke iisosi. Ipakethi ezintathu zeesosi yi- $ 29.85.
Kunokubakho iSauce Lovers E-Book enokufumaneka nge- $ 9.99 nje. Incwadi e inezinto ezine zokupheka ezivela kumpheki uJabril Riddick kunye neresiphi evela kwiSienna Sauce's Virtual Cook-Off.
4. Isosi yeSienna ivelise ngaphezulu kwe- $ 190,000 kwiRhafu ngo-2019
Ngokwe-CNBC Yenze I-Sauce Sauce ivelise i-192,000 yeedola kwingeniso ngo-2019. Isosi inikwa kwiiWalmarts nakwiivenkile ezingama-70 kulo lonke elaseMelika.
Lowo ngumgama omkhulu ukusuka kwindawo ehlanganisiweyo ekhitshini lasekhaya ..
Ndingayenza ngesandla [isosi] ngaphakathi ekhitshini rhoqo ngentsasa yangeCawa, uCrayton wazisa imveliso. Nje ukuba akulungele ukufumana indawo kumabonwakude, inkampani yakhe yaqala ukwenza isigqibo ngamathemba, kwaye uCrayton wenza ukhetho olongezelelekileyo kwiincasa.
5. Injongo yeCrayton yeyokuba iSienna Sauce ibe ligama lasekhaya
UCrayton wazisa i-CNBC ukuba injongo yakhe ngeSienna Sauce kukuba itshintshe ibe sisihloko sosapho. Uye wavula malunga nokuba ishishini lakhe litshintshe njani ukuba libe yinzuzo, kwaye yena okanye wabakhuthaza abantu ukuba basukele iinjongo zabo kwaye bangoyiki ukubuza imibuzo.
Ngamanye amaxesha sibanjwa nolonwabo kunye nemicimbi enjalo, nangona kunjalo ungoyiki ukuba buthathaka kwaye ubuze imibuzo ngenxa yoko kulungile ukuba ungabi ngoyena mntu ucocekileyo kwigumbi, utshilo. Ngamaxesha onke unokufunda komnye umntu.
Ngaphandle kwamathandabuzo uya kufumana amathuba okubuza imibuzo yabantu abanobuchwephesha obungakumbi kunaye kwakamsinya nje ukuba anikwe ixesha lakhe ngaphakathi Itanki yeShark . Tune ungene ukuze ubone ukuba uza kufumana umtyali mali.
Izigaba: Iwiki Umqala Inetflix
Umahluko ophambili phakathi kweHunting yeNdlu yeNduli kunye nokuHanjiswa kweBly Manor
Kubantu abaninzi, kunzima ukugcina ifilimu eyoyikisayo eyi-1.5 okanye ezi-2. Ngoku cinga ngokuyijika ibe luluhlu olupheleleyo lweziqendu ezili-10
Ixesha leCoroner 1 Isiqendu 7 Ukuphononongwa: Iidolophu
I-Ariel Ebusika Ngaba yiNtombazana eshushu ka-LA yokuthengisa ukutya kwi-Skintight Spandex
Ngaba 'i-Star Trek' 4 yenzeka ngo-Matt Shakman's Directing?
Ngubani Andrea Wendel? I-Wiki Biography, ubudala, phezulu, ixabiso lewebhu
Ngaba iVenom ngoku iyinxalenye ye-MCU?
Xa u-Beck Bennett no-Lauren Holt bemka, u-Aidy Bryant, uPete Davidson nabanye bajoyina i-cast
UKelly Clarkson uthintelwe ngexesha loPhicotho oluyimfama
Kwenzeka ntoni ngeKate & Marine?
Iipaneli ezimbini zeMarvel ezibhengezwe kuMsitho we-D23
UDaryl Sabara: UMyeni kaMegan woMqeqeshi kunye nodumo lwaBantwana abaHlola
Unyana wolahleko Ixesha lesi-2 Isiqendu sesi-6: Ityala laseNtloko
I-costco evulekileyo ngekrisimesi
intaba ibhola yehla ixesha
matt noyes umfazi wokuqala ujessica
ukuhla kwebhola esembindini
ngu lolo jones useyintombi
colin cowherd ex umfazi
ii-lucas kwixabiso elifanelekileyo